ko htike's prosaic collection: The signed petitions, which the military junta (SPDC) provided to UN representative, Mr. Gambari, were obtained from the civil servants and civilians
The signed petitions, which the military junta (SPDC) provided to UN representative, Mr. Gambari, were obtained from the civil servants and civilians
ဒါနဲ့၎-၁၀-၂၀၀၇ နေ့ရောက်တော့ xxxx တက္ကသိုလ် ပါမောက္ခချုပ် xxxx က xxxx တက္ကသိုလ် ပင်မဘွဲ့နှင်းသဘင် ခန်းမမှာ ကျွန်တော်တို့ ၀န်ထမ်းသင်တန်းသား အားလုံးကို ခေါ်ယူပြီးတော့ "တိုင်းပြည်ကို မချစ်ဘူးလား၊ ချစ်ရင် လက်မှတ်ထိုးကြရမယ်" လို့ဆွဲဆောင်စည်းရုံးပြီးတော့ ကျွန်တော့်တို့အား အတင်းအဓမ္မ လက်မှတ်ထိုးခိုင်းပါတယ်။ ကျွန်တော်တို့အားလုံး လက်မှတ်ထိုးဖို့ဆန္ဒမရှိလို့ဘယ်သူမှ လက်မှတ်မထိုးကြသေးပါ။ ဒါပေမယ့် ကျွန်တော်တို့ လက်မှတ်တွေ မရရင် ဆရာမကြီးအတွက် ဒုက္ခရောက်မှာကို စိုးရိမ်ကြတာရော၊ ဆရာမကြီးကိုယ်တိုင် က ဒီိပြဿနာတွေကို သိလို့ကျောင်းသားတွေကို ငိုယိုတောင်းပန်ခြင်းလာလို့ ရော။ ကျွန်တော်တို့အားလုံးရဲ့ ရှေ့ရေး၊ မိသားစုရှေ့ရေးကို ထိခိုက်မှာ စိုးရိမ်ရလို့ ရော ကျွန်တော်တို့တွေ နောက်ဆုံးမှာ အလုပ်ချင်ဘဲ ဆန္ဒမပါဘဲ လက်မှတ်ထိုးခဲ့ရြပါတယ်
Posted by ကိုထိုက် at 23:18
Has the letter been sent to UN HQ?
ဒီစာကတော့ တကယ်ပါပဲ။ နအဖက ခိုင်းချင်တိုင်း ခိုင်းလို.မရရင် အလုပ်ဖြုတ်ပစ်မယ်ဆိုပြီး ခိုင်းတဲ့အထာတွေရှိနေတာ မြန်မာပြည်သားတိုင်း သိနေကြပါတယ်။ သို.သော် UN အထူးကိုယ်စားလှယ်လို လူကြီးတွေ သိဖို. ဘာလုပ်ရမလဲ။ သူရှိနေတုန်း အတင်းအဓမ လက်မှတ်ထိုးထားခဲ့ရတဲ့ လူတွေ နည်းနည်းလောက် အော်လိုက်ရင် ကောင်းမယ်ထင်တယ်။ နိုဝင်ဘာလ6ရက်ပါ။ ခေါ်ထားတာ ရှိတယ် ၀င်ပါလိုက်ကြပါ နည်းနည်းလောက်ပါ